रबि लामिछानेले खेलाएको १ लाखकाे गेम, अब कस्ले जित्ला कतै तपाईंले पो होकी सेयर गर्नुस् ? - Nepali Janata Khabar
रबि लामिछानेले खेलाएको १ लाखकाे गेम, अब कस्ले जित्ला कतै तपाईंले पो होकी सेयर गर्नुस् ?
नेपाली चर्चित पत्रकार रबि लामिछानेले आज बाट कामका कुरा प्रशारण गर्ने भएका छन् र प्रशारण गर्ने बेला उनले एउटा नयाँ खेल पनि लिएर अाएका छन् ।
आज बाट म “कामका कुरा” गर्दैछु। टेलिभिजनहरु घरको भित्तामा मात्र सिमित नभएर मान्छेको पकेट पकेट्मा पुगिसकेको आजको जमानामा प्रविधि सँगै बदलिनै पर्छ। समस्त टेलिभिजन क्षेत्रलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने लक्ष्य सहित यो अ’वधा’रणा ल्याएका छौं। बदलिदो प्रविधिले अवसर सँगै थपेको चु’नौ’तीलाई स्वीकार गर्दै १ लाख पुरस्कार जित्न सकिने नयाँ कार्यक्रम शुरु गर्दैछौं।
यो गेम र यसको पछाडीको आइडिया मार्फत हामी यस्ता चुनौतीलाई अवसरमा बद्ल्ने प्रयास गर्दैछौं।यो सिजन गार्‍हो हुन्छ, सहिदिनु होला। आफुले भोगेका सम’स्या कमेन्टमा लेख्नु होला। प्रत्येक कमेन्टलाई हेरेर हाम्रो टिमले उपाय बताउने प्रयास गर्नेछ। बाँकी देखा जाएगा। भोलि कसले देख्या छ र??
एक सातासम्म भारी वर्षाको संभावना रहेको..
तरहराकाे एक पैनीमा श्रीमान श्रीमती एकैठाउँ मृत फेला